Kahor Kulanka Viktoria Plazen, Liiska Xiddigaha Dhaawaca Kaga Sii Maqnaanaya Real Madrid Oo La Ogaaday & Saddex Xiddig Oo Muhiim Ah Oo Qayb Ka Ah – GOOL24.NET
Kahor Kulanka Viktoria Plazen, Liiska Xiddigaha Dhaawaca Kaga Sii Maqnaanaya Real Madrid Oo La Ogaaday & Saddex Xiddig Oo Muhiim Ah Oo Qayb Ka Ah
November 5, 2018 Apdihakem Omer Adem
Kooxda Real Madrid ayaa guul ay toddobaadkan ka gaadhay dhigeeda Real Valladolid kaga soo kabatay natiijo xumo kulamadii ugu dambeeyay soo haysatay waxaana ay markan diirada saarayaan kulanka UEFA Champions League ee Viktoria Plazen.
Madrid ayaa kulankii lugta hore natiijo 2-1 ah kaga soo adkaatay Plazen waxaana ay markan maanka ku hayaan inay gaadhaan guushii saddexaad ee xidhiidh ah ee mudada uu kooxda hoggaaminayo tababaraha kumeel gaadhka ah ee Santiago Solari.
Liiska xiddigaha dhaawaca kaga maqan safka Los Blancos ee haatan ayaa ah shan xiddig oo kala ah Jesus Vallejo, Mariano, Marcelo, Raphael Varane iyo Dani Carvajal, Xiddigaha saddexda ah ee Varane, Marcelo iyo Carvajal ayaa ah kuwo muhiim u ah safka koowaad ee kooxda.
Warka farxada uleh jamaahiirta Real ayaa ah in dhammaanba saddexdan daafac ay awoodaan inay sameeyeen tababar yar oo shaqsi ah sida laga diiwaan galiyay tababarkii maanta oo Isniin ah.
“Waxa ay sii wadaan soo hababka kabashadooda ee kala horreeya” Ayaa lagu yidhi barta rasmiga ah ee kooxdan mar laga warramayay horumarka ay samaynayaan xiddigahani.
Tababarkan maanta ayaa ahaa mid ay markale kasoo muuqdeen xiddigo badan oo ka tirsan Castilla oo ah kooxda yar yarka Madrid waxaana kamid ahaa xiddigaha fursadaas helay Javi Sanchez, Manu Hernando, Dani Fernandez, Dani Gomez, Zabarte, Augusto iyo Martin.